စက်တင်ဘာထာဝရ: ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၏ (၅၀) နှစ်ပြည့် ရွှေရတုမွေးနေ့ အခမ်းအနား မယ် တော်ဆေးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ် (၆-၁၂-၂၀၀၉)
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၏ (၅၀) နှစ်ပြည့် ရွှေရတုမွေးနေ့ အခမ်းအနား မယ် တော်ဆေးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ် (၆-၁၂-၂၀၀၉)
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၏ (၅၀) နှစ်ပြည့် ရွှေရတုမွေးနေမှာသည် နှစ်၁၀၀တိုင်းတိုင်း မယ်တော်ဆေးခန်းနှင့် အတူး အဓွန်ရှည်တည်းတံ့ပါစေ့ (၆-၁၂-၂၀၀၉)
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကို ၁၉၅၉ ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ရက်နေ့တွင် မိခင် နမ့်လှကြည် နှင့် ဖခင် မန်းငြိမ်းမောင် တို့မှ အင်းစိန်ဆေးရုံ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား၊ ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ မဲဆောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၈၈၈၈ ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံ ပြီးချိန်တွင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး၊ နယ်စပ်တွင် ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များ၊ မိဘမဲ့ ကလေးများ၊ ရွှေ့ပြောင်းလာရောက် နေထိုင်ကြသူများကို မဲဆောက်မြို့ရှိ မယ်တော် ဆေးခန်းတွင် ဆေးကုသပေးလျက်ရှိသည်။ ထိုဆေးခန်းသည် အယောက် ၁၀၀ ခန့်ရှိသည့် အရေးပေါ် ဆေးကုသနိုင်သည့် ဆရာဝန်များ ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သူမသည် အရှေ့တောင် အာရှ ရေမွန် မာဂါဆေးဆေး (Southeast Asia’s Ramon Magsaysay Award) ဆုကို ၊ လူမှုကူညီရေးများအတွက် ခေါင်းဆောင်မှု ပြုလုပ်နိုင်သည့် အတွက် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် Time Magazine ၏ အာရှနိုင်ငံ အာဇာနည်များ စာရင်းတွင်လည်း အမည်ရွေးခံခဲ့ရသည်။
သူမသည် နိုင်ငံတကာမှ ဆုပေါင်း ၁၃ခုတိုင်အောင် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Jonathan Mann Award ကို ပထမဦးဆုံး လက်ခံရရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ထိုဆုသည် အမေရိကား နိုင်ငံ နှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ ဆေးဝါး အဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်း ချီးမြှင့်သော ဆုဖြစ်သည်။
ဆေးကျောင်းဘဝ နှင့် သူငယ်ချင်းများ။
သူ့မတွင် အစဉ်တစိုက် စွဲစွဲမြဲမြဲဖြစ်ရသော အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း မရှိခဲ့သော်လည်း၊ ကျောင်းတလျှောက် တက်ရောက်ခဲ့သောအချိန်တွင် သိကျွမ်းခဲ့သော သူငယ်ချင်းများသာရှိသည်။ အထက်တန်းများအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မော်လမြိုင် ဒေသကောလိပ်တွင် ၂ နှစ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် သို့ တက်ရောက်ခဲ့ချိန်တွင်၊ နယ်မှ တက်ရောက်ကြသော အဆောင်ကျောင်းသားအုပ်စုများနှင့် နေထိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ် ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းသည်၊ မော်လမြိုင် ကောလိပ် ၂ နှစ် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ရမှတ် နှင့် ဆယ်တန်း ရမှတ် တို့ ပေါင်းကာ ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ချက်အရ ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် သီတာဆောင်တွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်စဉ် ဘော်ဒါဆောင် အခန်းပြောင်းခဲ့ရသည့်အတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် သူငယ်ချင်းဟူ၍ မရှိခဲ့ပေ။ အဆောင်တွင် နေထိုင်ချိန်တွင်၊ မနက်မိုးလင်းသည့် အချိန်တွင် ရေချိုးရန် ရေမရှိခြင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာဆေးကျောင်းတွင် ကျောင်းတက်ရသည့်အချိန်တွင် အဆောင်သို့ပြန်ရန် ဘူတာရုံသို့ အပြေးအလွှားပြေးရခြင်း၊ ရထားမမှီလိုက်ခြင်းမျိုးများကြောင့် အဆင်မပြေမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်သည် တစ်စထက်တစ်စ ပျက်စီးယိုယွင်းစပြုသည့် အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်သည်။ စာသင်ချိန်များ ရွှေ့ပေးရခြင်း၊ ဖျက်ပေးရခြင်းမျိုးလည်း မကြာခဏ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သူမနှင့် ကျောင်းတွင်ရှိသည့် ကျောင်းသားများသည် “ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်နေရတာလဲ” ဟူသည့် မေးခွန်းများ မေးတတ်လာခဲ့ကြသည်။
စင်သီယာမောင်သည် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သူ တစ်ယောက်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် သူငယ်ချင်းများ နှင့် စကားပြောခြင်း၊ အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်မမှန်မှုတွေကို ပြောရခြင်းကို အတန်းထက်ပို၍ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ကျောင်းတွင် ပျင်းသည့်အခါ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ဝါရင့်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အတွေ့ကြုံနှင့် ယှဉ်ကာ သင်ကြားပေးမှုများ၊ တိကျသေချာသော အချက်အလက် အကိုးအကားများဖြင့် သင်ကြားပေးမှုကို နှစ်သက် သဘောကျခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းတက်နေချိန်ကာလတွင် မြစ်ကြီးနား၊ ပျဉ်းမနား၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မြို့ဖြစ်သည့် မြောင်းမြ မြို့များသို့ သူငယ်ချင်းများ နှင့် လိုက်၍ လည်ပတ်သွားရောက်ခဲ့သည်။
အလုပ်သင်ဆရာဝန် ဘဝ နှင့် ဆရာဝန်ဘဝ။
၈၈၈၈ လူထု ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကာလ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှ ဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တာ မကြာလှသေးသည့် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်သည် ရွာမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ပေါင်းကာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ကာ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။
စစ်တပ်သည် လူထုဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကို လက်နက်ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ကာ၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြည်အာဏာကို သိမ်းယူခဲ့ပြီး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲကို ဆက်လက် ဆင်နွှဲပြီး၊ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကို ချေမှုန်းဖယ်ရှားချင်ကြသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ နှင့် လူငယ်များသည်၊ နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်အားစုများရှိရာသို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ထွက်ခွာခဲ့ချိန်တွင်၊ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် တစ်ယောက်လည်း လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။
သူမတို့ (၁၄) ယောက်သည် အများအားဖြင့် ညဘက်အချိန်တွင်သာ ခရီးသွားခဲ့ကြပြီး၊ နေ့ဘက်အချိန်များတွင် ဇရပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း သို့မဟုတ် အိမ်တစ်အိမ်တွင် အနားယူခဲ့ကြကာ ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ ညဘက်အချိန်တွင် ခရီးစမ်းတဝါးဝါးသွားခဲ့ရသည့်အတွက် လမ်းတွင် ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည့် ကျေးရွာများ၏ အမည်ကို မမှတ်မိခဲ့ပေ။ သူတို့အဖွဲ့သည် ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေထဲမှာရှိသည့် ‘သိက္ခာရ’ (သိက္ကာယ) ဆိုသည့် ကျေးရွာသို့ ဘေးမသီ ရန်မခပဲ ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြသည်။ သိက္ခာရရွာသည် နယ်စပ်ဒေသတွင် ရှိသည့် ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ထိုရွာတွင် သူမတို့အားလုံး ကို ကေအန်ယူလူကြီးတယောက်၏ နေအိမ်တွင် နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ တပတ်အကျော်တွင် သူတို့အဖွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသည့် ကေအန်ယူလူကြီးများမှ ဘယ်စခန်း ကို ဆက်လက်သွားရောက်လိုသလဲဟု မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့ အားလုံး စဉ်းစားကြသည့် အခါတွင် (၁၄) မှ အများစုသည် ဘားအံမှ လာကြသည့်သူတွေဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘားအံမြို့မှ အသိများနေထိုင်ကြသည့် ‘ဝမ်ခ’ စခန်းသို့ သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကေအန်ယူမှ သူ၏ အဖွဲ့သွားရောက်လိုသည့် ဝမ်ခစခန်းကို လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဝမ်ခရောက်သည့်အချိန်တွင် ကျောင်းသားတပ်မတော် စတင်တည်ထောင်ပြီးချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် တချို့သည် ABSDF နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး၊ တချို့မှာ ကေအန်ယူ နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်သည် စထွက်ခဲ့စဉ်ကကတည်းက နယ်စပ်ရောက်လျှင် ဘာဆက်လုပ်မည်ကို ပြင်ဆင်ထားခဲ့သူ မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ ပူးပေါင်းခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ သို့သော် ကေအန်ယူမှ ကျောင်းသား အဖွဲ့တာဝန်ခံတယောက် နှင့် ဆက်သွယ်ပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းသားတာဝန်ခံမှ သူမ၏ ဆရာဝန်ပညာရပ်အား ကျောင်းသားများအတွက် အသုံးပြုပေးရန် နှင့် နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး ကိစ္စများတွင် အကူအညီပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်လည်း သဘောတူ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆေးဝါးဘက်ပိုင်းတွင် အနည်းအပါး ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ လုပ်ငန်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်မှုများ ရှိလာခဲ့သည်။ နယ်စပ်ဒေသ ကျောင်းသားစခန်းများအတွက် ဆေးဝါးရိက္ခာထောက်ပံ့ဖို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ NGO အဖွဲ့သေးများ နှင့် ဆက်သွယ်မှု ရရှိခဲ့သည်။
မယ်တော်ဆေးခန်း၏ အစ ။
လိုအပ်လာသည့်အခြေအနေအရ ဆေးဝါးရရှိရေး၊ အရေးကြီး လူနာများကို မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးသို့ အလွယ်တကူ လွှဲပြောင်း နိုင်ရေးနှင့် ကျောင်းသားတပ်များမှာ ဆေးတပ်သားများ လိုအပ်လာသည့်အတွက် ဆေးသင်တန်းပေးရန် မဲဆောက်တွင် မဖြစ်မနေ ဆေးခန်းကလေးတခု ခြေကုပ်ရယူခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် လူအင်အား ၆ ယောက်နှင့် ဆေးခန်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံဆေးခန်း ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင် တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ တည်ထောင်ရန် သူ့မတွင် အစီအစဉ်မရှိခဲ့ပေ။
တရားဝင်ရထားသည့်နေရာမဟုတ်သည့်အတွက် မည်သူ့ကိုမျှ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဆေးခန်းလေးကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူအင်အားနဲသော်လည်း ကူညီပံ့ပိုးမှုများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ ABSDF မှ ဆရာဝန်တချို့သည်လည်း လူနာကုသပေးခြင်း၊ ဆေးသင်တန်းပေးခြင်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ကော့ကရိတ်၊ ဒူးပလာ၊ ဘားအံ စသည့် ABSDF စခန်းခေါင်းဆောင်များ အနေနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်လူနာများ လိုက်ပို့ရင်း၊ လာကြည့်ရင်း နှင့် ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို ရရှိခဲ့သည်။ စင်သီယာမောင် မည်သို့ပင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း ဆေးခန်းရှိနေသည်ဆိုသည်ကို တစထက်တစ သိရှိလာကြသည်။
အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံထဲတွင် အလုပ်လာလုပ်နေကြသည့် အလုပ်သမားများ သိလာသည့်အချိန်တွင်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလာသည့်လူနာမျိုး၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ခံစား နေရသည့် လူနာမျိုးတွေကိုပါ ကုသပေးနိုင်ရေးအတွက် တစ်ပါတ် နှစ်ရက် နံနက်ပိုင်းအချိန်များတွင် စတင်ကုသပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများပါ ရောက်လာသည့်အချိန်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှု၊ သားဖွားမှုနှင့် ကလေးကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ကုသမှုများပါ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရသည်။
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်သည် အောက်ပါဆုများစွာကို သူ၏ ဆေးခန်းတွင် လှုမှုကူညီရေးအလုပ်များကြောင့် ရရှိခဲ့သည်။
1. ၂၀၀၈ Catalonia International Prize along with Daw Aung San Suu Kyi
2. ၂၀၀၇ Asia Democracy and Human Rights Award (Taiwan Foundation for Democracy)
3. ၂၀၀၇ World’s Children’s Prize for the Rights of the Child Honorary Award (Children’s World Association, Sweden)
4. ၂၀၀၅ 1,000 Women Nobel Peace Prize Nomination (Global)
5. ၂၀၀၅ Unsung Heroes of Compassion Award (The Dalai Lama and Wisdom in Action, USA)
6. ၂၀၀၅ The Eighth Global Concern for Human Life Award (Chou-Ta Kuan Foundation, Taiwan)
7. ၂၀၀၅ Included in Time Magazine’s November Article on 18 Global Health Heroes
8. ၂၀၀၂ Ramon Magsaysay Award for Community Leadership (Philippines)
9. ၂၀၀၁ Foundation for Human Rights in Asia Special Award (Japan)
10. ၂၀၀၁ Van Hueven Goedhart Award (Netherlands)
11. ၁၉၉၉ Jonathan Mann Health and Human Rights Award (USA)
12. ၁၉၉၉ American Women's Medical Association President's Award (USA)
13. ၁၉၉၉ John Humphries Freedom Award (Canada)
(စိုးနေလင်း ၏ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် သို့မဟုတ် အရိပ်ကောင်းသော သစ်တစ်ပင်စာအုပ်မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြဖြင်း ဖြစ်ပါသည်)။